१० लाख रुपयाको चकलेट ! | गृहपृष्ठ
Home र यो पनि १० लाख रुपयाको चकलेट !
on: March 26, 2018 र यो पनि
१० लाख रुपयाको चकलेट !
गुलियो वस्तु विशेषतः चकलेट हामीमध्ये धेरैलाई मन पर्ने खानेकुरा हो । विदेशी ब्राण्डका महँगा चकलेट देख्दा मुखमा पानी नआउने मानिस कमै होलान् । तर, एउटै चकलेट १० लाख रुपया प¥यो भने पनि तपाईंहरू किन्नुहुन्छ त ? मूल्य सुन्दा हाम्रो मनमा चकलेट त हीरा, मोती वा सुनबाटै बनेको हो कि क्या हो भन्ने आशङ्का उत्पन्न हुन सक्छ । पोर्चुगलको ओबिदोस शहरमा चैतको शुरूमा विश्वकै महँगो चकलेट प्रदर्शनमा राखिएको थियो । यो चकलेट पोर्चुगाली चकलेट निर्माता कम्पनी ड्यानियल गोमेजले बनाएको हो ।
हीराको आकारमा बनाइएको यस चकलेटको नाम ग्लोरियस हो । यसको भाउ करीब ९ लाख ८२ हजार रुपया (७ हजार ७ सय २८ यूरो) पर्दछ । चकलेट बनबनको १,००० ओटा संस्करणमध्ये एउटा र २३ क्यारेट सुनको जलप लगाइएकाले यति महँगो परेको हो । यसमा भएको सुनको जलप खान पनि मिल्छ । यो चकलेट गिनिज बूक अफ रेकर्डमा विश्वकै महँगो चकलेटको रूपमा सूचीकृत भएको कम्पनीले बताएको छ ।
चकलेटभित्र केशरको धागा, ह्वाइट ट्रफल हालिएको छ । यसमा म्याडागास्कारमा पाइने भेनिला र खान मिल्ने सुनको पातलो तह (गोल्डेन फ्लेक्स) पनि राखिएको छ । यो चकलेट तयार पार्न ड्यानियल गोमेजलाई १ वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो । यति महँगो चकलेटको सुरक्षाका लागि २ सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । संसारकै महँगो चकलेटको प्याकेजिङ मामूली हुने त कुरै भएन । चकलेटको बट्टामा कालो ल्याकुरेड उडन बेशमा सुनौलो अक्षरमा अङ्क कुँदिएको छ ।
यसको माथिपट्टि स्फटिकको कभर हालिएको छ, अनि हजारौं स्वारोभस्की स्फटिक र मोतीको जलप पनि लगाइएको छ । बट्टा खोल्ने ठाउँमा सुनको रिबनबाट तयार पारिएको ह्याण्डल राखिएको छ । चकलेट खाए पनि बट्टा भने सजावटका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । चकलेट निकै विशेष भएकाले जथाभावी विक्री गर्न नमिल्ने संयुक्त अरब इमिरेट्स, रूस र अर्जेण्टिनाजस्ता सीमित देशमा मात्रै ढुवानी गरिने बताइएको छ । यो चकलेट धनीका लागि मात्रै भएकाले यसले मिश्रित प्रतिक्रिया पाउने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । एजेन्सी